BBC Somali - Warar - Boliis ku dhintay weerar Kaniisad
Boliis ku dhintay weerar Kaniisad
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 Novermber, 2012, 12:14 GMT 15:14 SGA
Sarakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in hal askeri oo boolis ah uu ku dhintay qarax ka dhacay kaniisad ku taala magaalada Garissa ee waqooyi bari. Ugu yaraan 7 kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa oo ka dhacay kaniisada oo ku dhax taalay xarun boolis.
Qaar ka mid ah dadka dhaawacmay oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah ayaa waxa loo duuliyey caasimada dalka Kenya ee Nairobi.
Qaraxyo dhowr ah ayaa ka dhacayey magaalada Garissa iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari ee Kenya, tan iyo markii ay ciidamada kenya gudaha u galeen Soomalia sannadkii tagay. Bishii toddobaad ee sannadkan, weerar lagu qaaday laba kaniisadood oo ku yaala isla magaalada Garissa ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 14 qof.